အဘယ်အရာကို type ကို Website များ၏သငျငွေရှာဖို့ Make သင့်သ
လူတိုင်းအင်တာနက်နှင့်ကွန်ပျူတာပစ္စည်းများကိုစဉ်းစားသည့်အခါတိုင်း Mark Zuckerberg သို့မဟုတ် Bill Gates ဖြစ်လိုကြသည်။ နှစ်များတစ်လျှောက်အင်တာနက်သည်ပညာပေးစင်တာတစ်ခုအဖြစ်အသုံးပြုခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏အနှစ်တစ်ရာကျော်ကာလတွင်ဘောလုံးသည်အခြားတစ်ဘက်သို့လှိမ့်ဝင်နေပုံရသည်။ အနှစ်တစ်ထောင်ကာလသည်အင်တာနက်ပေါ်တွင်ငွေရှာရန်ကွဲပြားခြားနားသောစည်ပိုင်းအက၌ကခုန်နေပုံရသည်။ သို့သော်လူအများစိတ်ထဲတွင်ရှိနေသောမေးခွန်းမှာ“ ၀ င်ငွေရရန်မည်သည့် ၀ က်ဘ်ဆိုက်ကိုကျွန်ုပ်ရှာဖွေသင့်သနည်း” ဖြစ်သည်။
ကောင်းပြီ, ဤသူသည်သင်တို့ဖြစ်စေလောက်လွှဲ မှနေ. လွှတ်မှဖြေကြားသို့မဟုတ်သင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုချိုးဖျက်ဖို့လိုအပျကွောငျးအရေးပါသောမေးခွန်းဖြစ်ပါသည်။ အပေါ်လုပ်ကိုင်ဖို့က်ဘ်ဆိုက်၏ညာဘက် type ကိုရတဲ့ဖြင့်, သင်သည်ပရိသတ်ကိုလိုသော၏ကူညီပြီးထံမှကိုယ့်ကိုကိုယ်ကယ်တင်မည်။ တကယ်တော့တစ်ဦးကိစ္စအဖြစ်, သင့်ရဲ့ site များနှင့်ပမာဏ၏အောင်မြင်မှုကိုသင်အလွန်အမင်းသင်ရွေးချယ်သောနယ်ပယ်ပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။
website ကိုသင့်ရဲ့ type ကိုစျေးကွက်အတွက်အများကြီးထံမှထွက်မတ်တပ်ရပ်သင့်ပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်, ပြိုင်ဘက်နေရာတိုင်းရှိတယ်, သင်၏ website ကိုရှင်သန်ရပ်တည်ရေးအလွန်အမင်းသင့်ရဲ့ထူးခြားမှုနှငျ့သငျကြောင်းကိုသင်၏ပရိသတ်ကိုအရမ်းပျော်ရှိသည်အတွေ့အကြုံအပေါ်မူတည်ပါလိမ့်မယ်။ သငျသညျစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအမျိုးအစားကိုရွေးချယ်မီ, သင်တို့ကဲ့သို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမေးခွန်းအချို့မေးရန်လိုအပ်:
ငါ၏အ website တွင်ငါ၏အပရိသတ်ကို၏အခန်းကဏ္ဍကိုကဘာလဲ?
အထက်ပါမေးခွန်းများအဖြေရှိခြင်းအားဖြင့်, အချို့ကိုသင်နှစ်ကောင်ရဖို့လုပ်က်ဘ်ဆိုက်၏ညာဘက် type ကိုရွေးချယ်ဖို့တစ်ဦးအနေအထားတွင်ရှိလိမ့်မည်။ ဒီနေရာတွင်လုပ်သင့်တယ်ဝက်ဘ်ဆိုက်များအမျိုးအစားများဖြစ်ကြသည်:
ဒါဟာသင့်ရဲ့ site ပေါ်တွင်အချို့ကြော်ငြာတွေနေရာဘယ်မှာက်ဘ်ဆိုက်၏ဘုံအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ အခြားသူများကိုသူတို့၏အချိန်နှင့်ပိုက်ဆံကျူးလွန်ကြောင့်ထိုသူတို့အဘို့ဝင်ငွေသိသိသာသာအရင်းအမြစ်လုပ်နေချိန်မှာအတော်များများကဘလော့ဂါများဝင်ငွေတစ်ခုဖြည့်စွက်အရင်းအမြစ်အဖြစ်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ သော့ချက်စာလုံးများနှင့်အရည်အသွေးအကြောင်းအရာအသုံးပြုမှုတစ်ဦးမဖြစ်မနေဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျအဘို့သင်တို့ပရိသတ်ကိုတည်ဆောက်ရမယ်, သို့မဟုတ်သင်အတူတူလုပ်ဖို့အရည်အသွေးကိုအသွားအလာကိုဝယ်လို့ရပါတယ်။
ဒါကဖြစ်ကောင်းအများအပြားအနှစ်တစ်ထောင်အားဖြင့်လူသုံးအများဆုံးဆိုဒ်ကိုသည်နှင့်ဝင်ငွေအရင်းအမြစ်ဖြစ်လာသည်။ ကြော်ငြာတစ်ခုသတ်သတ်မှတ်မှတ်နည်းလမ်းကိုသုံးပြီးမည်သူမဆိုများသောအားဖြင့် Affiliate link များနှင့်စပွန်ဆာနှင့်အတူကထည့်သွင်း။ ဘလော့ဂါများလည်းကြီးမြတ်ပရိသတ်ကိုဆွဲထုတ်ဖို့အော်ဂဲနစ်အသွားအလာကိုဝယ်လေ့ရှိပါတယ်။ သင်တစ်ဦးအစားအစာလုပ်ငန်းများမှာပဲဖြစ်ဖြစ်, လူနေမှုပုံစံစတဲ့, အာဟာရသို့မဟုတ်ဖက်ရှင်အတွက်သောင်မတင်, ဘလော့ဂ်ဘို့သွားကြဖို့က်ဘ်ဆိုက်အမျိုးအစားကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။ တစ်ဦးက လေ့လာချက် Billionaire ဘလော့ကလပ်အားဖြင့်အမျိုးမျိုးသောဘလော့ဂါများဟာသူတို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ကနေအကြံဝင်ငွေမည်သို့ဖော်ပြသည်။
e-commerce website ၏တစ်ဦးကအကြီးအဥပမာအားဤမြေကွက်၌ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာမှစိုက်ပျိုးခဲ့သော Amazon.com ဖြစ်ပါသည်။ သင်သည်သင်၏ website တွင်ကွဲပြားခြားနားထုတ်ကုန်ရောင်းချခြင်းစဉ်းစားနေတယ်ဆိုရင်, သို့ဖြစ်လျှင်ဤအဘို့သွားကြဖို့က်ဘ်ဆိုက်အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာတဦးတည်းတည်ထောင်နိုင်ရန်အကုန်အကျဖြစ်ပါတယ်နှင့်သင့်ပရိသတ်ကိုရောက်ရှိဖို့လှည်ဖြစ်လိမ့်မယ်။ သငျသညျအော်ဂဲနစ်အသွားအလာကိုဝယ်သို့မဟုတ်သင့် site ကိုကြော်ငြာရန်အသွားအလာနှင့်အတူတစ်ဦးသက်တမ်းကုန်ဆုံးဒိုမိန်းကိုဝယ်လို့ရပါတယ်နေရာအရပ်ဖြစ်၏။
Affiliate site ကို
ရည်ညွှန်းခြင်းဖြင့်ဤနေရာတွင်ပိုက်ဆံလုပ်ပါ။ သငျသညျရညျညှနျးသူသို့မဟုတ်သူမသည်ထုတ်ကုန်ကိုဝယ်ယူသည်မဆိုလူတစ်ဦး; သငျသညျအခြို့သောကော်မရှင်ဝင်ငွေ။ Nerdwallet နဲ့တူတစ်ဦးက site ကိုပြီးသားထုတ်ကုန်အမျိုးမျိုးကိုဧည့်သည်များ diverts တစ်ခုထူထောင် Affiliate site ကိုဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့စျေးကွက်မဟာဗျူဟာများပေါ် မူတည်. ကလူတွေကိုသင်ယုံကြည်စိတ်ချရမတိုင်မီကြာနှငျ့သငျအကြံပြုကုန်ပစ္စည်းဝယ်ယူစတင်ရန်ဖြစ်နိုင်သည်။ သငျသညျအသိအမြင်ဖန်တီးထိရောက်သောစျေးကွက်ရှာဖွေရေးသယ်ဆောင်ရန်အမြင့်ဆုံး converting အသွားအလာကိုဝယ်လို့ရပါတယ်။
သင့်ရဲ့ site ကိုမှတဆင့်ငွေရှာသင့်ရဲ့ပရိသတ်ကိုသတိပြုမိစေရန်သင့်ရဲ့အားထုတ်မှုအပေါ်မူတည်ပါသည်။ သောစာဖတ်သူကိုမှတန်ဖိုးရှိနှင့်အချက်အလက်များဖြစ်ပါတယ်ကြောင်းကိုသင်၏က်ဘ်ဆိုက်အတွက်ကောင်းစွာ-optimized အကြောင်းအရာရှိခြင်းကိုဆိုလိုသည်။ သင့်ရဲ့အကြောင်းအရာအတွက်သော့ချက်စာလုံးများရှာဖွေရေးအင်ဂျင်၌သင်တို့အဘို့အရှာဖွေနေတဲ့အခါမှာသင့်ရဲ့ပရိသတ်ကိုအစာရှောင်သင်သည် identify လုပ်သိသာဖြစ်ကြောင်းသတိရပါ။
alauddin	9 ညနေ: ဧပြီလ 2019,6မှာ 07 အပေါ်